Apple inotanga kuhaya vashandi veXNUMXth Apple Store muJapan | Ndinobva mac
Vakomana vanobva kuCupertino vanga vachinyarara vachishanda paApple Chitoro muJapan, chitoro chausina kunzwa kubva zvino. Ichi chitsva cheApple Chitoro chichave chiri muKyoto, uye kuburikidza newebhusaiti yeApple yekupa mabasa tinogona kuwana zvese zvinzvimbo zvinofanirwa kuzadzwa kuchitoro ichi chitsva. Apple inoenderera nekuvimba neJapan seimwe yemanyuko ayo makuru emari mushure meUnited States neChina, uye ye edza kusimbisa kuvepo kwayo munyika, ichi chitsva Apple Store ichavhura.
Sekureva kwaMacotakara, kambani iri kutsvaga mamaneja ezvitoro, vatengesi, mabharani nevashandi kuti vagadzirise matambudziko akasiyana anouya nevashandisi veApple. Kyoto iguta diki kana tikachienzanisa nemaguta makuru eJapan, asi iyo yave nzvimbo yakakosha yevashanyi munyikaKutenda kumatembere, zvivakwa zveumambo, zvinokwezva, nzvimbo dzinoera ... Nenzira iyi, Apple haina kungogadzirira ichi Chitoro cheApple kuruzhinji rweguta, asi zvakare yaida kukwezva kufarira kwevanhu vese vanoshanyira guta.
Apple ine mumiriri wakakura wekambani iri muTokyo, uko kune zvakare Apple Watch Outlet, chimwe chezvitoro zvitatu zvakavhurwa neApple kutenderera pasirese, chiri icho choga icho chiri kuvhurika, sezvo mamwe maviri ari muLondon neParis akavhara rinopfuura gore rapfuura. Chitoro chitsva cheApple chiri muKyoto inogona kunge iri Apple Store nhamba mazana mashanu, nhamba iri kuda kusvika Apple, asi zvese zvinoenderana nenguva inotora kambani kudzidzisa vashandi vanodiwa kuti vakwanise kuvhura madhoo eApple iyi. Chengetedza zvakaringana kuruzhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inotanga kuhaya vashandi veXNUMXth Apple Store muJapan
Iko kusimudzira "kudzokera kukirasi" kunosvika kuSpain nechipo chevamwe Vanorova